ukuguqa - Geofumadas
Cinga ukuba unomdlalo we-45 weplati, kunye neebhokisi okanye iimodyuli kwi-Layout ezithatha ulwazi oluhambelana netafile kwi-Microsoft Office, njengephepha lephepha, owamkelekileyo, umhla wokuvunywa, njl njl. Kwaye kufuneka usebenzise utshintsho kuzo zonke iindiza ngaphandle kokuba uvule enye, uguqule idatha kuphela ...
ingxaki 1. ifayile DGW 3D ivula ngokungathi 2 kuphela dimensions yinto exhaphakileyo ukuba xa uvula DWG ifomati yefayile 3D kunye Microstation, vula ngokungathi Ndiswele 2 imilinganiselo. Oku kwenzeka ngenxa yokuba Microstation ngokuqhelekileyo ezicwangcisiweyo iinketho zabo, ifayile imbewu (imbewu), ilingana a ...
Isidingo esisoloko sikwazi ukukwazi ukutshintshwa okwenziwe kwimephu okanye imephu, ngokuthelekiswa njengoko kwakungaphambi kokuba kulungiswe okanye njengengqesho yexesha, kwiifayile ze-CAD ezifana ne-DXF, iDGN kunye ne-DWG. Ifayile ye-DGN yindlela yokwakheka kunye neyakhethiweyo ye-Microstation. Ngokuchasene noko kwenzeka ntoni ...
Microstation CONNECT Edition - kuya kuba yimfuneko ukuba ukuqhelana interface entsha
KUKHONO LWOKUQINISWA KWE-Microstation, eqaliswe kwi-2015 kwaye igqityiwe kulo nyaka ngu-2016, i-Microstation iguqula imbonakalo yayo yemveli yesikhokelo kwi-menu ye-top-level bar ye-Microsoft Office. Siyazi ukuba olu tshintsho luzisa iziphumo zalo kumsebenzisi owaziyo ukuba unokufumanaphi amaqhosha, njengoko kwenzeke kubasebenzisi be ...
I-MyGeodata iyinkonzo enokumangalisayo e-intanethi apho kunokwenzeka ukuguqula idatha ye-geospatial, nge-CAD eyahlukeneyo, i-GIS kunye neefomati zeRaster, kwiinkqubo ezahlukeneyo kunye nenkqubo yesetyenzisiweyo. Ukwenza oku, vele ulayishe ifayile, okanye ubonise i-URL apho igcinwa khona. Iifayile zingalayishwa enye enye, okanye ...
Kweli nqaku siza kubona ukuvula indlela, theming ze ulebhelishe ifayile SHP usebenzisa Microstation V8i, njengoko usebenza Bentley Map. Nangona iifayile ze-archaic ze-16 bits, ubudala njengabanye - ezininzi-ezinwele zam ezibomvu, akunakukhunjelwa ukuba ziyaqhubeka zisetyenziselwa imeko yethu ye-geospatial. Kucacile ukuba le migaqo igxininisa kwizinto ezixhunyiwe kwimifanekiso ...
Ubunokwenzeka bokusebenzisana neGoogle Maps kunye neGoogle Earth kunye nokusingatha idatha kwi-scanners ngenye yezilindeleke ngokukhawuleza kwanoma iyiphi inkqubo ye-GIS - CAD. Kule miba akukho mntu unabaza ukuba isofthiwe esimahla iye yaqhubela phambili ngokukhawuleza kunokuba isofthiwe yangasese. Okwangoku ndiphonononga ukuhlaziywa kwesibili ...
I-Google Earth ibe yithuluzi elingenakukhunjulwa kwiinkqubo zethu zangoku ze-cartographic. Nangona kunemiqathango yayo kunye neziqhamo zokukhululeka kwayo imihla ngemihla ininzi eyenziwa, siyifumana esi sixhobo sokuthi i-geolocation kunye nokuhamba ngeemephu ziyaziwa kakhulu namhlanje.
Abo banethemba lokusebenzisa i-Microstation 8.5 namhlanje kufuneka batyelele kwi-Windows XP kwimishini engqinekanga yokungahambelani ne-Windows 7, kakhulu ngakumbi kwi-bits 64. Bakhankanya ingxaki ngomhleli wombhalo, endikhankanyile ngasentla njengesisombululo kwaye ndibhekisela kumphathi wesithombe kunye noxhumano lwe-ODBC. Makhe sibone indlela asombululwe ngayo ...
Umguquleli we-intanethi kwi-Intanethi ye-GIS - CAD kunye neRaster
MyGeodata Converter iyinkonzo Internet lula ukuguqulwa data phakathi yeefomati ezahlukeneyo. Kuba ngoku inkonzo uyakuqonda 22 iifomati yegalelo kumda wesangqa: ESRI Shapefile Arc / Info Binary Our Arc / Info .E00 (ASCII) Microstation DGN Our (7 Version) MapInfo File olwahlulwe ngumahluli Ixabiso (CSV) GML eyisebenzisayo KML GeoJSON UK .NTF SDTs US Census ...